“Bara Chaarteraa TPLF chaartera keessaa dhiibee ABO baasuutti nii gaabbina” – Kichuu
HomeAmharic“Bara Chaarteraa TPLF chaartera keessaa dhiibee ABO baasuutti nii gaabbina”
“Bara Chaarteraa TPLF chaartera keessaa dhiibee ABO baasuutti nii gaabbina”
Qondaalota olaanoo TPLF keessaa tokko kan ta’an Obbo Geetaachoo Raddaa waliin guyyaa har’aa turtii taasifnee jirra.
Turtii kanas waayila keenya Gaazixeessituu Mooneet Badhaasaa kan taasifte yoo ta’u dhimmoota adda addaa irratti waliin turtiin godhameera.
Obbo Geetaachoo Raddaa qondaalota mootummaa ammaa keessaa tokko kan ta’an Obbo Shimallis Abdiisaa akka guddisaniitti dubbatan. Akkasuma aangoo dheebochuuf jecha OPDO’n jaakkeettii keenya baataa turan kan jedhus yaada qondaala olaanaa TPLF obbo Geetaachoo Raddaa har’aati.
Dhimma garaa garaa irratti gaaffiin kan godhameef yoo ta’u, WBO fi TPLF hariiroo durumaan waliin qabaachaa turuu kan mootummaan miidiyaan afarsaa jiru irratti illee gaafatamanii deebisaniiru. Akka obbo Geetaachoo Raddaa jedhanitti kanaan dura WBO waliin hariiroon qabaataa turan hariiroo waraanaa kan qaamolee walitti dhukaasan gidduu akka ta’e himu.
“Bara bara qabnu osoo WBO gargaarree ta’ee hin gaabbinu ture” kan jedhan gorsaan Peresedaantii naannoo Tigraay Qondaalli TPLF kun, waan kanaan dura ABO- WBO irratti gochaa turaniif kan gaabban ta’uu himu.
Waan gurgurtaa lafaa OPDO’n kan wal qabatu kan dubbate qondaalli olaanaa TPLF kun “bar tokko Alamuu Simee waajjira lafaa irra turee achii kaasuun gara hogganaa Ispoortiitti ramadan. Guyyaa tokko dorgommiin yeroo taasifamu gaazixeessaan haala dorgommii wayiita isa gaafatutti ‘amma dorgommiin taasifamy kuma tokko, kuma shan, kuma kudhan KM iskuqeerii dha jechuun isa lafa chabachabee gurguri sana se’ee dubbate. Alamuu Simeefaa nama lafa Oromoo haga godina tokkoo ta’u jatee saamee qabatee jirufaafi nu cabsuuf yaalaa jira” jechuun dubbate obbo Geetaachoo Raddaa.
Kana malees “da’imman dhiyeenya Wallaggatti dhumaaniif sagalee ta’uu dhabuu kiyyatti nan gaabba” jechuun ajjeechaawwan suukanneessoo Wallagga keessatti bara kana raawwatamaa jiran irraa illee xuquu yaalaniiru.
Ajjeechaan suukanneessaan baruma kana Wallagga magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoonni shan bakka tokkotti rasaasaan yoo ajjeefaman, Magaalaa Dambidoolloo keessatti ammoo dargaggoon Oromoo maqaa Abbaa Torbeeti jedhamuun adda baaba’ii irratti waraana mootummaa Itoophiyaan ajjeefameera.
Akka haasaa qondaala TPLF kanaatti isaan kanaaf sagalee ta’uu dhabuutti illee akka ofitti mufate kaaseera. Turtii keelloo waliin taasiseen dhimma ajjeewwaan bara aangoo isaanii keessa raawwataman ilaalchisuun sanaaf gaafatama kan fudhatu OPDO ta’uu akeeke.
Kunis ta’ii sana ofii raawwachuu OPDO eeruudhaan gootummaan na jala dhaabbachuu qabu utuma ajaja dabarsineeyyuu yaada jedhu kenneera.
Bara Chaarteraa OPDO’n qabatanii ABO dhiibanii chaarteera keessaa baasuutti qondaalonni isaan TPLF isaan duraa gaabbii akka qaban kan ibsu Obbo Geetaachoon, ofii wayiita sana barataa turuu isaa dubbateera.
ቆይታ ከህውሃት ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባል እና የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር | KELLO MEDIA (August 20, 2021)
Uumatni D-Doolloofi naannishee dheebuu ABO bara dheeraa akkasitti bahani, 6 Onk 2018
Uumatni D/Doolloofi naannishee dheebuu ABO bara dheeraa akkasitti bahani, 6 Onk 2018 Simannaa ABO jaal…
Khartouhm-TPLF rakkoo keessaa baasuuf Sudan yaaliitti jirti !!
Khartouhm-TPLF rakkoo keessaa baasuuf Sudan yaaliitti jirti. Ammas akkuma bara 1990 san waan yaadamu jira.…
DaandiiRagabaa- Haasawaa Hayyuduree ABO, Ob Daawud Ibsaa, Amajjii 1 bara 2018
DaandiiRagabaa- Haasawaa Hayyuduree ABO, Ob Daawud Ibsaa, Amajjii 1 bara 2018 We are bigger than…
Painful Truths in Oromia!! Under Neftegas’ government.
Why I support the “alliance” between the OLA, TPLF/TDF, and other Liberation Movements
That Our Oromo Leaders should NEVER negotiate away our birthright to form our own independent & sovereign republic if our people so decide, and any “solution” ANYONE can formulate which is not going to provide adequate answer to this Oromo question is simply not going to work in the end, in solving the Empire’s dilemma,